Chiitiko Chinetso chaNovember 11, Zuva reVeterans muUS | Ndinobva mac
Hatina kumboona kwenguva yakareba dambudziko nyowani reChiitiko, kunyanya yekupedzisira yakaitika Nyamavhuvhu wadarika kupemberera zuva remapaki. Zvikurukuru, pachiitiko ichocho, ivo vaiyedza kuita musangano wekudzidzisa uchiteverwa neinenge maminetsi makumi mashanu munaGunyana 50, ikozvino iri dambudziko reMabasa rinouya mwedzi mitatu gare gare.
Ndizvo zve veterans zuva rekupemberera inotevera November 11. Iri izororo rakakosha muUnited States uye kubva kuApple ivo havana kuda kupotsa mukana wekuwedzera dambudziko remitambo kuti varipemberere. Gore rakapera dambudziko iri rakaitwa zvakare uye zvakare Apple inowedzera kune vatambi vakawanda.
Pachiitiko ichocho, sezvo zvinoita sekupedzisira gore rino, mushandisi aifanira kupedzisa kudzidziswa kwemaminetsi gumi nerimwe chete neAction app, zvisinei nebasa rakaitwa pakupera kwekubudirira. Mune ino kesi, mukushaikwa kwekusimbiswa, zvinoita kunge zvakafanana chinangwa uye menduru ichawedzerwa kune runyorwa rwezvakaitika Muchiitiko Chekushandisa kweApple Watch uye iPhone, zvitambi zvinoenderana zvinozowedzerwa kuti zvikwanise kugovana kuburikidza neFaceTime, mameseji uye mamwe maApple eApple.
Dambudziko chete nekubudirira uku nderekuti hazvizivikanwe kana chichava chinetso chepasirese kana kana vashandisi muUnited States vangango chiwana, sekufunga kwangu ndinorangarira zvakaitika gore rapfuura. Parizvino Apple haina kujekesa iyi pfungwa uye zvichave zvirinani mirira kuti zuva riuye 11 of noviembre kuti uone kana ichigona kupedzisira yawanikwa mune chero nyika uye isu tichava takagadzirira icho pachinongosvika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nyowani yechiitiko chinetso chaNovember 11, Zuva reVeterans muUSA
Tweetbot 3 yeMac inogadziridzwa nekuwedzera maGIF uye dzimwe nhau
Apple inoenderera mberi "kuratidza" yekutanga Apple Store muThailand